နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ: Elephanta Island သို့ အလည်တစ်ခေါက်
Elephanta Island သို့ အလည်တစ်ခေါက်
The Gateway of India (Mumbai)
မိမိရောက်ရှိနေရာ အနီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာလေးတွေ ရှိတယ် ကြားရင် အလည်အပတ်ခရီး တစ်ခါတစ်ခေါက်ဖြစ်ဖြစ် သွားချင်စိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယခုရောက်နေတာက ဘုံဘေ။ ဘုံဘေ ဆိုတာက အရှေ့တိုင်းရဲ့ နယူးရောက်လို့ တင်စားပြောနိုင်မလား။ဒီမြို့မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ဘီလျံနာ သူဌေးကြီးများ လည်းရှိသလို ဖြစ်သလိုစား ဖြစ်သလိုနေထိုင်ကြတဲ့ အခြေအနေမဲ့ Slum များလည်း အများအပြားရှိကြလေရဲ့။ ဗီဇာကသက်တန်းက မကြာမှီ ကုန်တော့မယ်။ ဘုံဘေရောက်စဉ် လည်ပတ်သင့်ရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ချို့ ဆီ သွားဦးမယ်လို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။
ဘယ်နေရာ သွားရင်ကောင်းမလဲ….၊ လွယ်ပါတယ်..အင်တာနက်ပေါ် ရှာလိုက်။ ဘုံဘေတစ်ခွင်က တို့ရစ် ဆိုက် လို့ ဂိုဂယ်မှာ ရိုက် ထည့်..ရှာလိုက်တာ။တွေ့ပါပီ…ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ရှေးဟောင်း နေရာ..Elephanta Island and Elephanta Caves တဲ့။ လိုကေးရှင်းကို ဂိုဂယ် အတ်နဲ့ ရှာကြည့်တော့ ဘုံဘေ နဲ့ မနီးမဝေး ခရီး။ တစ်နေ့တာတော့ အချိန်ပေးရမယ်။
Elephanta Island ကိုရောက်ပါပီ
ဒီရထား စီးရင် အသွားအပြန် ၁၀ ကျမယ်
၀င်ကြေးပေးရသည် ၂၅၀ စီ.
ဒါနဲ အစောကြီးအိပ်ရာထ၊ မနက်ငါးနာရီခွဲမှာ အသင့်ပြင်၊ ၆ နာရီမှာ တည်းခိုရာ Kalina University Campus မှ ဒေသအခေါ် Auto, သီရိလင်္ကာ အခေါ် Three Wheel,ထိုင်းအခေါ် တုတ်တုတ် စီးပြီး Santacruze(E) ဘူတာသို့ ထွက်ခဲ့တယ်။ Santacruze(E) မှ Churchgate သို အသွားအပြန် ရထားလက်မှတ်ဖြတ်၊ ရထားစောင့်စီး၊ Churgegate သို့လာတယ်။ နောက် Gateway of India ကို ခရီးဆက်…တယ်။ မနက်စာ စားပြီးနောက် နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၈ နာရီခွဲ။ Elephanta Island သို့ သွားတဲ့ ပထမဆုံး ဖယ်ရီဘုတ်က မနက် ၉နာရီ။ သဘောင်္မှီအောင် India Gate သို့သွား..၊ ဖယ်ရီဘုတ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ နေရာယူ..၉ နာရီထိုးတာနှင့် လှေ ကမ်းက ခွါ .. Elephanta Island သို့ ဦးတည်မောင်းပါတော့တယ်။….
ပင်လယ်နဲ့ မစိမ်းလှပေမဲ့ ဘုံဘေ ဆပ်ကမ်းအလှ ကို ပထမဆုံး ထိတွေ့ခွင့်ရတာမို့…မော်တော်ဘုတ်စီးရင်း ရှုခင်းတွေကို မှတ်တမ်းတင်တယ်။ကင်မရာလေးလည်း ဘက်ထရီကုန်မှ အနားရပါတော့တယ်…။ :P
ဘုံဘေ ဆိပ်ကမ်း.အိန္ဒိယ ဂိတ်ဝေးမှ မနက် ၉ နာရီထွက်..၊မနက် ၁၀နာရီမှာ Elephanta Island သို့ဆိုက်ပါတယ်။ ဘုံဘေ အပြန်မော်တော်က နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၅နာရီခွဲ အထိ နာရီဝက် တစ်စင်းထွက်ပေးတယ်။ ဆိပ် ကမ်းနဲ့ ကျွန်း က တစ်ကီလိုမီတာ သာသာပါ။ ရထားလေးစီးမလား…ရတယ်။ ၁၀ ပေးရမယ်။ ကျွန်းပေါ် ရောက်လို့ အ၀င်..ဂိတ်ကြေးက တစ်ခါ ပေးရပြန်တယ်။ ကျွန်းဂိတ်ကိုဖြတ်ပြီးနောက် ကျောက်လှေကားလေးနဲ့ ကုန်းလေးကို တက်သွား၊ တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ ခင်းထားတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းတွေက ကျိုက်ထီးရိုးကို ပြန်ရောက်နေသလား ထင်ရတယ်။ အစာမြင်ရင် အတင်း ၀င်ဆွဲလု တတ်တဲ့ မျောက်တွေက ဟို နားဒီနား တွေ့ ရတယ်။
ဘာသာခြားနဲ့မရောယှက်..ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ဘုရားပုထိုး ဆင်းတု ဂူတွေ ရှိသေး တယ်လို့သိရပေမဲ…No visitors allow ပါတဲ့။ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် စေတီဘုရား ဆင်းတုတော်တွေလည်း…..သင်္ခါရတွေပါဘဲ။
တောင်ကုန်းကို ကွေ့ပတ်ပြီးတောင်ထိပ်တက်သွားတော့ တွေ့ရတာက အမြောက်ကြီး ၂ လက်။ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ The Guns of Navarone ကိုပြန်အောက်မေ့ မိပါတယ်။
၂ နာရီမှာ ပြန်ထွက်တဲ့ ဖယ်ရီ နဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီး..တည်းခိုရာအဆောင်ရောက်တော့ ညနေ ၄ နာရီခွဲပါပြီ။ ဘုံဘေအနီးရှိ.World Heritage စားရင်းဝင် Elephanta Island and Caves ဆီ အလည်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း မှတ်တမ်းပြုရပါသတည်း။…….။
Posted by Ashin Kumara at 2:41 PM
မြောက်ပိုင်းက တပ်ဂ်ျမဟာရ်ကိုတော့ ရောက်ပြီးပြီ မုံဘိုင်းကိုလဲ သွားချင်တယ်။ ရွယ်ထားတာတော့ ကြာနေပြီ။ စရိတ်ကြီးလွန်းလို့ ငွေဆုလိုက်ဦးမယ်။
violet fower said...
ဆရာတော်များ ဦးထုပ်လေးတွေချွတ်ရိုက်ရင် သင့်တော်မှာပါ စပ်ကြားကြီးဖြစ်နေတယ် ဘုရား